Xigasho mareegaha - Diiwaangelinta Domain Hosting Web
Codso xigasho mareegahaaga
Buuxi foomka faahfaahintaada oo waa lagugula soo xiriiri doonaa
iyada oo aan waajib ka ahayn mid ka mid ah khubaradayada oo,
adigoo ka bilaabaya falanqaynta fikradaada iyo baahiyahaaga.
wuxuu ku siin doonaa dhammaan macluumaadka la xiriira horumarka
Daraasad horudhac ah, abuurista garaafyo la habeeyey iyo doorashada qaabaynta bogga ee naqshadeeye shabakad xirfad leh. Waxaanu dejin doonaa qaabka iyo qaab-dhismeedka goobta iyo ganacsiga e-commerce ee ku habboon baahiyahaaga iyo adeegsiga goobta ugu habboon mashruuca aad codsatay.
Sawirada iyo nuxurka
Doorashada iyo dib u tabashada sawirada iyo summada ee naqshadeeye garaaf; diyaarinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ganacsigaaga oo uu sameeyo khabiir suuqgeyneed webka. Waxaan dib uga shaqeyn doonaa macluumaadka aad noo soo dirtay si aan ugu habeyno goobta macluumaadka (sawiro, muuqaalo, qoraalo, sharraxaad) kuwaas oo ka hadlaya adiga iyo mashruucaaga internetka
Muuqashada matoorada raadinta
Hagaajinta waxyaabaha ku jira iyo xulashada ereyada muhiimka ah ee khabiir SEO ah, si uu kuugu muujiyo makiinadaha raadinta ee ka mid ah natiijooyinka dabiiciga ah ee la xidhiidha ganacsigaaga. Waxaan ka shaqayn doonaa dhammaan dhinacyada si aan u wanaajino mareegaha ereyada matale ee meheraddaada shabakada iyo si loo wanaajiyo natiijooyinka Google iyo makiinadaha raadinta ee ugu muhiimsan.
Codso qiimo la'aan ama waajibaadka iibka xiga ee adeegyada horumarinta mareegahayaga
Mid ka mid ah la-taliyayaashayada ayaa kula soo xiriiri doona si uu ku weydiiyo macluumaad dheeraad ah oo lagama maarmaanka u ah diyaarinta qiyaasta
Ma jiro wax iibsi. Haddii aad go'aansato inaad sii waddo, maalmo yar gudahood khubaradayadu waxay bilaabi doonaan hawlaha horumarinta ee mashruucaaga
Buuxi foomka tafaasiishaada, waxaana kula soo xiriiri doona iyadoon waajib ku ahayn mid ka mid ah khubaradayada oo ka bilaabaya falanqaynta fikradaada iyo baahiyahaaga, ku siin doona dhammaan macluumaadka la xidhiidha adeegga horumarinta mareegaha.
Alaabta AlaabtaWareejinta waxyaabaha jiraHal bog bog (hal bog)3 bog internet (cidaynu nahay, waxa aanu samayno, nala soo xidhiidh)Mareegta shirkadda oo leh in ka badan 3 bogMareegta iskaashiga ah (Adeegga WebAgency)Nasashada mareeg jirta
Website (haddii ay jirto)
Goob u weyn sida mashruucaaga Shabakadda
Adeegga wakaaladda shabakada waxaanu ku dhisaynaa goobtaada ama ganacsigaaga e-commerce wax kasta oo aad uga baahan tahay joogitaankaaga onlaynka ah
Platform aan lahayn xadka ballaarinta
Waxaan ku abuurnaa goobtaada meelaha ugu caansan ee shabakada. Iyada oo WordPress ah waxaad ku bilaabi kartaa saldhigga qaabeynta ee madalkaaga, kaas oo aad ku dari karto astaamo, bogag iyo cutubyo markaad u baahato.
Wararka, si loo maareeyo wararka ku saabsan ganacsigaaga
Dhacdooyinka, si aad u maamusho shirarka aad abaabusho
Sawir / muuqaal muuqaal ah, oo loogu talagalay walxo warbaahin ah